Izinto zethu zokuphrinta ngokwezifiso zithunyelwa nazo I-EMS EXPRESS!
Q: Zithini Izikhathi Zokulethwa Ezilinganisiwe Emiyalweni Yami?
I-US, UK, CA, AUS Ukulethwa Kwesikhathi Sokulethwa: Izinsuku eziyi-12-25 (EMS Nge-Destination Tracking)
Isikhathi Sokulethwa Sokulethwa: Izinsuku eziyi-10-14 (i-DHL Ngokulandela Indawo)
I-US, UK, CA, ukulinganiselwa kwesikhathi sokulethwa kwe-AUS: Izinsuku eziyi-10-25 (i-EMS Ngokulandela Indawo)
Noma iyiphi izicathulo ama-oda angakafiki zingakapheli izinsuku ezingama-45 zokucubungulwa kwama-oda afanelekile ukubuyiselwa imali noma ukubuyiselwa kwemali kwamahhala.
Q: Ngizoluthola Nini Ulwazi Lokulanda Ngama-oda wami?
Okwezinombolo ezilandelwa ukulandela i-oda lase-US kungathatha izinsuku ezingama-7 ngemuva kokuthi kucutshungulwe i-oda lokulandela idatha. Qiniseka ukuthi usebenzisa iwebhusayithi elandelwayo efanelekile okuyi www.17track.net/en.
Okwezinombolo ezilandelwa ukulandela i-oda zamazwe omhlaba kungathatha izinsuku ezingama-10 ngemuva kokuthi kucutshungulwe i-oda lokulandela idatha ukukhombisa.Qiniseka ukuthi usebenzisa iwebhusayithi efanelekile yokulandelela. www.17track.net/en. Yaziswa, ama-oda aphesheya awabuyiswa uma esethunyelwe futhi ngeke akhombise idatha yokulethwa lapho uya khona.
Sisebenza kwi KONKE ukuthengisa kuyinqubomgomo yokugcina. Lokhu kusho ukuthi ngeke ukhansele, ubuyise, noma uthole ukubuyiselwa kwemali nge-oda ngaphandle kokuthi kube yiphutha ekugcineni kwethu.
Q: Angijabule Ngobukhulu Bezihlangu Nokulingana. Kumele ngenzeni?
A: Sicela usithumele i-imeyili ku support@thekdom.com futhi usazise ukuthi yini inkinga! Sizosebenza nawe ukulungisa inkinga. Uyacelwa ukuthi ukhumbule, lawa amahembe awashicilelwa ngokwezifiso, enziwa ngoku-oda Uma sesiphrintiwe, ngeke sikwazi ukukuphrinta noma ukubuyisela esitokisini. Ngakho-ke, sizozama ukufeza okuthile ukuqinisekisa ukuthi wanelisekile ngokuthenga kwakho!
Q: Wenze iphutha nge-oda lami. Siyini Isixazululo?
A: Siyaxolisa kakhulu. Akwenzeki kaningi, kepha akekho ophelele. I-imeyili support@thekdom.com futhi sizosebenza kanye nawe ukuyilungisa. Imvamisa, lokhu kuzodinga nje ukuthi usithumele isithombe sephutha esilenzile ukuze sikwazi a) uqinisekise isimangalo sakho bese b) sikubiza ukuze usilungise.
Sine-assortment enkulu yemikhiqizo engafakiwe indlu. Ngakho-ke, lapho u-oda izinto eziningi ngasikhathi, zingathunyelwa ngokuhlukile ukuze zifike kuwe ngokushesha. Ungathola into eyodwa ngaphambi kwelandelayo, ngakho-ke ngicela ungatatazeli uma ungazitholi zonke izinto zakho ngasikhathi sinye, vele ukhumbule ukuthi zisendleleni!